Iimbobo zeeNwele kwi-graduation 2015, iinwele eziphakathi, ifoto. Iibhola zee-Graduation ze-2015 zeenwele eziphakathi, ifoto
Senza i-hairstyle yokugqibela yeenwele eziphakathi
Izinwele eziphakathi - ubude obude, obuvumela ukuba wenze i-hairstyle ekhethekayo okanye i-styling. Namhlanje siza kuthetha malunga neentlobo zee-styles ekugqibeleni i-2016 zingenziwa kubanini beenwele kumahlombe, indlela yokudala umfanekiso ohambelanayo.
Iifoto zeRetro kwiidanga eziphakathi Iiskiti zeewele eziphakathi kunye neengqungquthela zebhola yokugqibela Iibhola
Iifoto zeRetro kwisigidi esiphakathi kweenwele eziphakathi
Ngexesha elizayo, isitayela se-retro siyaba nefanelekileyo. Abafundi abatsha abagqwesileyo baya kujongeka ngokukhawuleza kwiimfestile zefestile "trapezoid", kunye neengubo ezikhukhulayo kunye nesigxina esinqeni. Qinisekisa umfanekiso kunye nekhwele elincomekayo.
Iimpawu zeeNwele zokugqiba i-2016 kwizinwele eziphakathi
Ikhetho lokuqala "i-babette", oko kukuthi, i-knot ephezulu kunye ne-front front. Yigqokise le nkcaso ngekhredithi yeenwele eziqhambileyo okanye ikhefu, kunye nebhebhoni ebanzi ngesaphetha.
Inkcazo iya kunceda ukwenza umfanekiso wesimboli kwisitayela se-20-30 x. minyaka. Umzekelo kufuneka ube yi-divas ekhangayo yeHollywood endala. Ukukhutshwa ngokucophelela kwimiyalezo kuphonswa kwelinye icala kwaye kulungiswe ngoncedo lwezibilini ezingabonakaliyo okanye ezintle. Umnxeba wokugqiba umlenze obomvu emlonyeni.
Iifowuni zokugqiba i-2016: ifoto kwizinwele eziphakathi
AmaScythe for hair aphakathi
Iibhondi zithandwa kakhulu kwaye azikwazi ukulungeleka ngokufanelekileyo. Ingqungquthela yaseFransi okanye i-spikelet inokuya kwelinye icala lentloko, kwaye ngaphantsi kwalo lugqityiweyo kwinqutyana encinci.
Iimpawu zeeNwele kwi-prom for izinwele eziphakathi, isithombe 2016
I-pigtail inokubeka lula phezu kwentloko. Ukuhlobisa "isithsaba" sinokuba iintyatyambo okanye isantya sokuqala.
Iintlanzi zeewele eziphakathi ekugqibeleni 2016
Iintlobo zeeNwele kwiindlela zesiGrike zidibanisa iifenethi ezihambelanayo kunye neengubo ezinde. Izinwele zibeka emacaleni emacaleni amancinci, kwaye emva kwentamo iphosa. Ingxenye ebalulekileyo yale ndawo yokugcoba i-bezel okanye ibhondi ekhanyayo eneentyatyambo ezimnandi.
Iingqungquthela kunye nee-curls ze-prom
Iileta zibukeka zinkulu kwiinwele zobude obude. Kukho iinketho ezininzi zelo hlobo lokupakisha. Ungasebenzisa i-papillotok ukwenza ama-curls afanelekileyo kwaye ungeze kubo ukuthambisa okuthakazelisayo (umzekelo, umonakalo omanzi, ukhanyayo).
Iiphulaphu ezinkulu zilungele ukuphosa kwelinye icala kwaye zongeza ivolumu ebunzini. Ukukhupha i-hairdress kwabukeka ngokukhawuleza, ukufakela iinwele kwi-spraykami eneendidi ezininzi.
I-stylish, eyawubamba i-tappe ebomvu-i-curls engenakukhathazeka. Ukukhwabanisa kufuneka kube lula kakhulu, kwaye ikhephe ngokukhawuleza. Kuya kulungeleka ukubheka i-hairpin ngendlela yeentyatyambo ezinkulu. Ingakumbi i-topical i-hairstyle efana neenwele eziphakathi kunye nezinto eziphambili, ukucafaza i-shadow okanye ukuthotywa.
Izinwele eziqokelelweyo yi-classical hairstyle. Isikhwebu sinokuphakama, sakhiwe ukusuka kwi-lock lock, efana nesigobollo esisebunjeni, okanye esezantsi, epholileyo okanye enamandla, ebetha kwi-braids edibeneyo.
I-borim e-asymmetric ngokudibanisa nokuhlukana kwe-oblique ibonakala ingavamile.
Ukuba kubonakala kuwe ukuba ucoceke izinwele ngokugqithiseleyo kwandisa ubudala, koko wongeza ukunganakwa: khupha imida encinci, wenze iinwele. Iimbalo ze-Stylistic zinokulungiswa lula ngokukhawuleza. Ngoko ngeentyantyambo ezinyaweni zakho uya kujonga ulutsha, imiqhele kunye neengqimba ziya kunika umfanekiso wesibindi, kunye ne-bezels - inothando.
Siyathemba ukuba emva kweengcebiso zethu, iinwele zakho ezide ubude ziya kugqunywa kwi-hairstyle enhle kwibhola lokuphothula i-2016.
Ziziphi iimpahla endizikhethayo kwi-disco
Iingcamango ezimbalwa zengubo yokugqoka entwasahlobo
Izambatho zesiThili zesiCape
Ikhekhe "I-Great Chocolate Pot"
Kutheni umntu enomqondo wesitayela?
I-Parmedjana evela kuma-arubergines
Ukufa komama: ukutolika kunobungozi nje ngephupha ngokwalo?
Intombi yam yathandana nomntu omdala
Iikremu ngeepum, i-ricotta kunye nobusi
I-Dysbacteriosis: kubangela kunye nokubuyiselwa kwemali
Kvass ukusuka olwandle
Indlela umfazi angayiphendula ngayo ngokukrexeza
Isidlo esivela kwi-sorrel nesipinashi